I-Intel's Clear Linux OS Manje Inikeza Amathuluzi Agxile Konjiniyela we-Linux | Kusuka kuLinux
I-Intel's Clear Linux OS Manje Inikeza Amathuluzi Agxile Konjiniyela we-Linux
El Iphrojekthi ye-Intel's Clear Linux OS ikhiphe isethi entsha yamathuluzi agxile kunjiniyela we-Linux wohlelo lwayo olususelwa ku-Linux elungiselelwe ukwakhiwa kwe-Intel.
Ngenkathi i-Clear Linux OS ingadumile njenge-Ubuntu, i-Debian noma i-Arch Linux, ihlale ikhombisa ukuthi iyisistimu yokusebenza esekwe futhi esheshayo esekwe ku-Linux yamadeskithophu namaseva, enikeza ukusebenza okuhle kakhulu kusuka kubakhiwo be-Intel.
Sula i-Linux OS ilandela imodeli ye- “Rolling-release” lapho umsebenzisi ufaka kanye kuphela futhi uthola izibuyekezo unomphela.
I-Intel ibilokhu ifuna ukuthi lokhu kusatshalaliswa kukhethwe ngabathuthukisi, ngakho-ke manje sekumemezele izithombe ezintsha, isifaki esibuyekeziwe, isitolo sesoftware kanye nenkundla enikezelwe konjiniyela beLinux, yanoma isiphi isayizi, ubulili noma ubudala, enikela ngokuqukethwe okukhethiwe ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kahle okusemandleni.
Nakhu okusulwa i-Linux OS enikeza onjiniyela be-Linux
Ngalesi sinyathelo, Sula i-Linux OS ifuna ukuba ngukukhetha okukodwa konjiniyela be-Linux. Labo abanentshisekelo bangafaka iphakethe eliphelele ngomyalo olula, ozohlinzeka wonke amathuluzi afanele wokuthuthuka kwe-C (c-basic) kanye nokusetshenziswa kweziqukathi zamacala okusetshenziswa (iziqukathi-eziyisisekelo).
Sula i-OS Linux manje izama ukusiza abathuthukisi ukubhala ikhodi ngokushesha ungeza i-GCC yakamuva (iqoqo le-GNU Compiler) 9 njengesihlanganisi esizenzakalelayo, futhi uhlela ukubuyekeza i-GCC 10 ngokushesha nje lapho itholakala.
Uhlelo lokulungisa iphutha lwe-FUSE (i-Filesystem ku-Userspace) lwasetshenziswa ukuqeda isidingo sokufaka amaphakheji wokulungisa amaphutha angeziwe. Ngakolunye uhlangothi, onjiniyela manje banenketho yokukhetha phakathi kwe-GNOME, KDE Plasma, Xfce, LXQt, i3 ne-Awesome njenge-graphical imvelo noma umphathi wewindi.
Uma ufuna ukuzama wonke amathuluzi we-Sula i-Linux OS kufanele uwalande kusuka ku- iwebhusayithi esemthethweni.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » I-Intel's Clear Linux OS Manje Inikeza Amathuluzi Agxile Konjiniyela we-Linux
Ukuba sengozini okusha kutholwe kuma-processor we-Intel